W ITH ngenhloso " ancintisane izinga ezinhle nokuthuthukisa nge lokusungula " futhi isimiso inkonzo ' ukuthatha funa amakhasimende' njengoba ukuma ", sizobe ngobuqotho benikeza imikhiqizo abaqeqeshiwe futhi service enhle amakhasimende ezifuywayo international.
" Dala Amanani, Ukukhonza Customer !" inhloso silandelisa. Sinethemba elikhulu lokuthi wonke amakhasimende uyomisa esikhathini eside nokubambisana ezizosihlomulisa namanye us.If ufisa ukuthola eminye imininingwane mayelana inkampani yethu, Sicela uxhumane nathi manje!
T yena nesipiliyoni emkhakheni ukusebenza kuye kwasisiza yakha ubuhlobo ubudlelwane obuqinile amakhasimende nesibambisene nabo kokubili emakethe ezifuywayo international. Iminyaka, imikhiqizo yethu akhishwe zithunyelwe emazweni angaphezu kuka-15 emhlabeni futhi esetshenziswa amakhasimende.
Ukuthatha umqondo core " kube Zibe Abantu Abadala Abavuthiwe ". Sizokwenza redound phezulu umphakathi imikhiqizo high kanye ezinhle. Sizokwenza isinyathelo ukuze ubambe iqhaza namanye amazwe ukuba ekilasini nomkhiqizi lokuqala kwalo mkhiqizo emhlabeni.
C ertainly, amanani abiza, iphakethe ofanele futhi kwezidingo ngesikhathi esifanele ngeke uqiniseke ngokuthi ngamunye izimfuno amakhasimende '. Sinethemba ukwakha ubudlelwano bebhizinisi nawe ngesisekelo nekuzuza futhi inzuzo esikhathini esizayo esiseduze kakhulu. Wamukele ngemfudumalo ukuba uxhumane nathi futhi babe cooperators yethu ngqo.
W e baye iminyaka engaphezu kwengu-10 akhishelwe khona isipiliyoni kanye nemikhiqizo yethu baye expored emazweni angaphezu kuka-30 emhlabeni izwi. Sihlala ubambe wesevisi yeklayenti wumgomo wokuqala, Quality kuqala engqondweni yethu, futhi esiqinile nge izinga umkhiqizo. Siyakwamukela ngokuvakashela yakho!
P roducts akhishwe e-Asia, Mid-empumalanga, emakethe European naseJalimane. Inkampani yethu njalo kwaba ukwazi ukubuyekeza imikhiqizo ukusebenza kanye nokuphepha ukuhlangabezana izimakethe silwele ukuba A phezulu ku izinga ozinzile futhi inkonzo ngobuqotho. Uma une nodumo ukwenza ibhizinisi ne inkampani yethu. sizokwenza ngokuqinisekile singenza konke okusemandleni ukusekela ibhizinisi lakho e-China.
" Izinga Good, inkonzo Good " uhlale wumgomo wethu futhi credo. Sithatha yonke imizamo ukulawula izinga, iphakethe, amalebula njll futhi QC yethu uzohlola yonke imininingwane ngesikhathi ekukhiqizeni nasekusakazeni ingakafiki imithwalo. Sizimisele usungule ubudlelwane ibhizinisi eside nalabo abafuna okusezingeni eliphezulu imikhiqizo eyikhwalithi kanye service enhle. Sisethe ebanzi yokuthengisa inethiwekhi emazweni Europe, North America, South America, Middle East, Africa, I-Asia countries.Please uxhumane nathi manje, uzothola okuhlangenwe nakho wethu wezokusebenza izinga okusezingeni eliphezulu amamaki kuyoba nesandla ebhizinisini lakho.
H onest zonke amakhasimende bayacelwa wethu! Okokuqala-class ukukhonza, nqampuna umhlabeleli, intengo engcono esheshayo ukulethwa usuku inzuzo yethu! Nikeza wonke amakhasimende ezinhle sokukhonza wumgomo wethu! Lokhu kwenza inkampani yethu uthole umusa amakhasimende nokusekelwa! Siyakwamukela wonke amakhasimende emhlabeni usithumelele nophenyo futhi ngabomvu ezinhle nokubambisana yakho! Sicela uphenyo lwakho ukuze uthole eminye imininingwane noma isicelo elidayisa e ezifundeni ezithile phesheya.
O imikhiqizo main inkampani ur sika kabanzi emhlabeni wonke; 80% imikhiqizo yethu zithunyelwe e-United States, eJapane, eYurophu nakwezinye izimakethe. Zonke izinto ngobuqotho izivakashi wamukelekile woza ukuvakashela factory sethu.